Ndị na - emepụta ụlọ ọrụ Neckchiefs - China Neckchiefs Ndị na - enye ha & actorylọ ọrụ
Nri oriri na ọ Restauranụ waitụ ụlọ oriri na ọ kitchenụ kitchenụ ụlọ nri U502S0100A
Brand CHECKEDOUT Item Code U502S0100A Size ONE SIZE Key word chef waiter ngwa, olu olu Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu ogologo, akwa adighi, nchikota, o nweghi oria, oria aghaghi, ndu ije ozi bu oge abuo ka kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Tlọ oriri na ọ cheụ kitchenụ na-eri nri kọfị na ngwa nri U502S0200A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U502S0200A Size NA SIZE Isi okwu isi onye na-echere ngwa, ndi isi olu akwa 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi carcinogens, ndu ije ozi bu oge abuo ka kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Tlọ oriri na ọ cheụ kitchenụ na-eri nri kọfị na ngwa nri U502S0400A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U502S0400A Size ONE SIZE Key word chef waiter accessories, neck chief Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, pughi isi, onweghi oria, odighi aru, ndu ya bu oru ugboro abuo. kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Nri ụlọ oriri na ọerụ cheụ ndị isi CU504S059000T4
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CU504S059000T4 Size NA SIZE Isi okwu chef edo ngwa, olu olu, ndi isi oche, ndi ile ozo eji akwa 60/40 poly / owu GSM.143g Xinjiang Aksu owu di otutu, ogha mkpuchi, enweghi mmebi, enweghi carcinogens, Ndụ ọrụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi…
Nri oriri na ọ Restauranụ waitụ ụlọ oriri na ọ kitchenụ Restauranụ ụlọ nri U502S0700A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U502S0700A Size ONE SIZE Key word chef waiter accessories, neck chief Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi oria, ndu azumahia bu ugboro abuo kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Nri ụlọ oriri na ọerụ cheụ nri isi CU504S161000T4
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu CU504S161000T4 Size ONE SIZE Key word chef uniform ngwa, isi olu, ndi isi, ndi ile ọbịa eji akwa 60/40 poly / owu GSM.143g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi carcinogens, Ndụ ọrụ oge 2 dị ka uwe isi nri oge niile. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ya hig ...
Nri oriri na ọ Restauranụ waitụ ụlọ oriri na ọ kitchenụ Restauranụ ụlọ nri U502S1100A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U502S1100A Size ONE SIZE Key word chef waiter accessories, neck chief Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi oria, ndu azumahia bu ugboro abuo dika kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Tlọ oriri na ọ cheụ kitchenụ na-eri nri kọfị na ngwa nri U501S0100A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U501S0100A Size ONE SIZE Key word chef waiter accessories, neck chief Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi oria, ndu azumahia bu ugboro abuo dika kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Tlọ oriri na ọ cheụ kitchenụ na-eri nri kọfị na ngwa nri U503S0100A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U503S0100A Size ONE SIZE Key word chef waiter ngwa, olu olu Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu ogologo, akwa adighi, nchikota, o nweghi oria, ndu ya adighi oru ya. kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Tlọ oriri na ọ cheụ kitchenụ na-eri nri kichin ngwa nri ndị isi U501S0200A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U501S0200A Size ONE SIZE Key word chef waiter accessories, neck chief Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi oria, ndu azumahia bu ugboro abuo dika kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Tlọ oriri na ọ cheụ kitchenụ na-eri nri kọfị na ngwa nri U503S0200A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U503S0200A Size ONE SIZE Key word chef waiter accessories, neck chief Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi oria, ndu azumahia bu ugboro abuo dika kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...
Tlọ oriri na ọ cheụ kitchenụ na-eri nri kọfị na ngwa nri U501S0400A
Brand CHECKEDOUT Ihe Koodu U501S0400A Size ONE SIZE Key word chef waiter accessories, neck chief Fabric 65/35 poly / cotton GSM.235g Xinjiang Aksu owu toro ogologo, ogha adighi, paipu, enweghi carcinogens, ndu ije ozi bu oge abuo ka kootu onye isi. A na-akpọkwa eriri akwa Polyester. A na-akpọkarị ya (bead light). Nke na-eme ka mmiri ghara idi ike, na-emebi ala, yana ezigbo mmiri. N'ihi ike ya dị elu, nguzogide abrasion dị mma, l ...